Perfect Hat-trick . . . . assist တို့ နဲ့ အတူ . . . Mbappe ပြန်လာပြီ . . . . - SPORTS MYANMAR
Perfect Hat-trick . . . . assist တို့ နဲ့ အတူ . . . Mbappe ပြန်လာပြီ . . . .
နေမာ မပါ၀င် ပေမယ့် လည်း PSG တို့ ချန်ပီယံ လိဂ် မှာ အခြေ အနေ လှ နေခဲ့ ပါတယ် ။ အုပ်စု အတွင်း မှာ ၃ ပွဲ စလုံး နိုင်ပြီး အဆင့် ၁ နေရာ ကို ရယူ ထားကာ နောက် တစ်ဆင့် တက်ဖို့ နီးစပ် နေပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။ ယမန်နေ့ ညက PSG ဟာ ကလပ် ဘရုဂေး နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ခဲ့ပြီး အဝေး ကွင်းမှာ ၅ ဂိုး သွင်းကာ ဂိုးပြတ် အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီပွဲ မှာ ခြေစွမ်း ပြ ခဲ့သူ ကတော့ တိုက်စစ်မှုး လေး ကိုင်လီယန် အမ်ဘာပေ ပါပဲ ။ ယမန်နှစ် ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက မက်ဆီ ရဲ့ နောက် ဒုတိယ ဂိုးသွင်း အများဆုံး ကစား သမား ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ ဘာပေ ဟာ ဒဏ်ရာ ကြောင့် ရာသီ အဖွင့် ပွဲတွေ ကို လွဲချော် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယမန်နေ့ ညက ပွဲမှာ တော့ ဘာပေ ဟာ မိနစ် ၄၀ လောက် ၀င် ကစားပြီး ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး လူငယ် တစ်ဦး ဆိုတာ ကို သွင်းဂိုးတွေ ၊ ဖန်တီးမှု တွေ နဲ့ သက်သေ ပြလို့ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ကြံ့ခိုင်မှု အပြည့် အဝ မရရှိ နိုင်သေးတာ ကြောင့် အရန် စာရင်း ကနေ စတင် ခဲ့ရ ပေမယ့် ဘာပေ ရဲ့ ခြေစွမ်း တွေ ကတော့ ရပ်တန့် လို့ မရနိုင် ခဲ့ ပါဘူး ။
ဒုတိယ ပိုင်း ၅၂ မိနစ် မှာ ဘာပေ ဟာ ချူပိုမိုတင်း ရဲ့ နေရာကို လူစားလဲ ၀င်ရောက် လာခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ နောက် ၉ မိနစ် အတွင်း မှာပဲ ဘာပေ ဟာ PSG အတွက် ဒုတိယ မြောက် ဂိုး ၊ သူ့ အတွက် ဂိုး နံပါတ် ၁ ကို သွင်းယူ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
နောက်ထပ် ၂ မိနစ် အကြာမှာ တော့ ဘာပေ ဟာ အသင်း ဖော် မော်ရို အီကာဒီ အတွက် ဂိုး ကို ဖန်တီး ပေးခဲ့ ပြီး ၃ – ၀ ဖြစ်စေ ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ နောက် မှာတော့ သူ ကိုယ်တိုင် ၂ ဂိုး ထပ်သွင်း ပြီး PSG ကို ၅ – ၀ နဲ့ အနိုင် ရစေ ခဲ့ သလို သူ့ အတွက် လည်း ဟက်ထရစ် ဖြစ်စေ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာပေ ဟာ ဒီသွင်း ဂိုး တွေ ကို ဘယ်ခြေ ၊ ညာခြေ နဲ့ ခေါင်းတိုက် သွင်းယူ ခဲ့တာ ကြောင့် Perfect Hat-trick သွင်းယူမှု လည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ချန်ပီယံ လိဂ် သမိုင်း တစ်လျောက် ၂၀၀၈ အောက်တိုဘာ တုန်းက ဗီလာရီးရဲ ကစား သမား ဟိုဆီဘာ လော်ရန်တေး နောက်ပိုင်း လူစား ၀င် ပြီး ဟက်ထရစ် သွင်းယူ နိုင်တဲ့ ပထမဆုံး ကစား သမား လည်း ဖြစ်လာ စေခဲ့ ပါတယ် ။
PSG ဟာ ပွဲစဉ် ၃ အပြီး ရမှတ် ၉ မှတ် ရရှိ ထားကာ အုပ်စု တွင်း အဓိက ပြိုင်ဘက် ဖြစ်သူ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ထက် ၅ မှတ် သာလွန် နေခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာပေ ၊ နေမာ ၊ ကာဗာနီ တို့ မပါဘဲ ရီးရဲ ကို ဂိုးပြတ် အနိုင် ကစားထား သလို အီကာဒီ ကို လည်း နွေရာသီ တုန်းက ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့တာ ကြောင့် တိုက်စစ်ပိုင်း ပိုမို တောင့်တင်း သွားခဲ့ကာ ချန်ပီယံ လိဂ် မှာ ဗိုလ်စွဲ နိုင်ဖို့ အလားအလာ ကောင်းတဲ့ အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်လာ စေခဲ့ ပါတယ် ။